CHPW Daryeelka Virtual - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Faa'iidooyinka Qorshaha Medicare > Daryeelka Virtual CHPW
U tag dhakhtar adigoon guriga ka bixin
Daryeelka Virtual ee CHPW ayaa kuu oggolaanaya la hadal dhakhtar ruqsad haysta 24 saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii… Xataa marka rugtaada caafimaad ama xafiiska dhakhtarka caadiga ah la xidho.
Waa Maxay Daryeelka Virtual?
Ku soo dhowow CHPW Daryeel Faneed: Dhakhtarku wuu ku arki doonaa — hadda!
Daryeelka Virtual, oo sidoo kale loo yaqaan caafimaadka or telemedicine, waa marka bixiyeyaasha caafimaadku ay daryeel kugu siiyaan teknolojiyadda isgaarsiinta, sida taleefannada gacanta iyo fiidiyaha nool. Halkii aad ka walwalsan lahayd oo aad sugi lahayd ballan, waxaad dhakhtar ku booqan kartaa daqiiqado gudahood, adigoon gurigaaga ka bixin.
Waxaa intaa dheer, oo leh Qorshaha Faa'idada Medicare ee CHPW, Kharashka booqashada caafimaad ee dalwaddu waxay la mid tahay booqashada qof ahaaneed.
Sida Loo Helo Daryeelka Virtual ee CHPW
Haddii rugtaada Caafimaadka Bulshada ee caadiga ah ama dhakhtarka daryeelka aasaasiga ahi ay bixiyaan adeegooda caafimaadka, waxay kuu sheegi doonaan sida loo sameeyo ballankaaga.
Haddii adeeg bixiyahaagu uusan bixin caafimaadka caafimaadka, waad isticmaali kartaa Daryeelka Virtual CHPW mid ka mid ah siyaabaha soo socda:
on a computer: Iska diiwaangeli ama gal at chpwvirtualcare.org.
On a Apple qalab: Download the CHPW App Care Care, oo isdiiwaangeli ama gal.
On a Android qalab: Download the CHPW App Care Care, oo isdiiwaangeli ama gal.
Ballan u samee booqashada wakhti go'an, ama codso booqashada “sida ugu dhakhsaha badan”. Diyaarso macluumaadkaaga caymiska CHPW.
Dhakhtar shati haysta oo ka socda CHPW Virtual Care ayaa kula xiriiri doona taleefan ama fiidyow.
Ma jiro waqti xadidan oo ku saabsan fadhigaaga Daryeelka Virtual. Dhererka wuxuu kuxiranyahay arinta caafimaad ee aad wax ka qabaneyso.
Ma u baahan tahay taageero farsamo? Ka wac CHPW Daryeelka Virtual ee 1-855-994-6777 ama email [emailka waa la ilaaliyay].
Sidee CHPW Daryeelka Virtual u shaqeeyaa
Goorma ayaan u isticmaalaa Daryeelka Virtual?
U isticmaal CHPW Daryeelka Virtual kaliya cuduro aan degdeg ahayn. Haddii aad leedahay xaalad degdeg ah oo caafimaad, wac 911.
Ma hubo haddii Daryeelka Virtual yahay doorashada saxda ah? Ka wac CHPW's 24/7 Kalkaaliso Kalkaaliso Nurse 1-866-418-2920 (TTY: Garaac 711) gargaar. Khadka La -talinta Kalkaalisada ayaa kaa caawin kara inaad go'aansato haddii ay tahay inaad aragto dhakhtarka Daryeelka Virtual, ama aad raadsato daryeel degdeg ah ama daryeel isbitaal.
Muxuu ka caawin karaa dhaqtarka daryeelka caafimaad ee CHPW?
Dhakhaatiirta Daryeelka Virtual CHPW waxay baari karaan, daweyn karaan, oo u qori karaan daawo noocyo badan oo cudurro guud ah iyo arrimo caafimaad oo aan degdeg ahayn oo ay ka mid yihiin:
Qufac / qabow
Daawooyinka: Dhakhaatiirta Daryeelka Virtual ee CHPW ayaa kuu qori kara daawooyin haddii loo baahdo. Warqadaha dhakhtarku qoro waxaa loo diraa si elektaroonig ah ama taleefan ah farmashiyaha shabakadda adigu aad dooratay, waxaadna ku isticmaali kartaa gaarsiinta boostada haddii farmashiyahaagu uu siiyo adeegga dalabka boostada xubnaha CHPW.
Dhakhtarka Daryeelka Virtual ee CHPW wuxuu fakis ugu diri karaa booqashadaada daryeel bixiyahaaga aasaasiga ah haddii aad rabto inaad la socoto. Dhakhtarka Daryeelka Virtual ee CHPW ma samayn karo gudbin ku takhasusay ama bixiyeyaasha kale. Haddii aad u baahan tahay inaad dabagasho kadib la -tashiga tooska ah, fadlan la xiriir bixiyahaaga daryeelka aasaasiga ah.
Iyadoo leh Qorshaha Faa'idada Medicare ee CHPW, kharashka booqashada caafimaad ee dalwaddu waxay la mid tahay booqashada qof ahaaneed. Fadlan eeg faahfaahinta qorshahaaga Caddaynta Daboolista (EOC).
Ka faa'iideysiga booqashadaada Daryeelka Virtual
Daryeelka ficil ahaaneed wuxuu u suurta gelinayaa dhakhaatiirta inay bixiyaan daryeel muhiim ah oo ka baxsan afarta darbi ee xafiiska dhakhtarka.
Waa kuwan shan talooyin oo looga dhigayo booqashadaada telemedicine mid wanaagsan:
Kala hadal daryeel bixiyahaaga daryeelka ku-meel-gaarka ah.
La xiriir dhakhtarkaaga ama bixiyahaaga si aad u ogaato haddii ay bixiyaan booqashooyin daryeel dalwad ah, iyo saacadaha la bixiyo. Qaar badan oo ka mid ah Xarumaha Caafimaadka Bulshada, dhakhaatiirta daryeelka aasaasiga ah, takhasusleyaasha, iyo bixiyeyaasha caafimaadka habdhaqanka ee Washington waxay bixiyaan daryeel macquul ah.
U dejiso jawi ku habboon booqashadaada daryeelka dalwaddeed.
Inta lagu jiro ballanta macmalka ah, waxaad kala hadli doontaa bixiyahaaga daryeelka caafimaadka sida aad caadiyanba ulahadli lahayd xafiiska dhakhtarka. Si dib loogu abuuro booskaas intii suurtogal ah, hel meel gaar ah oo deggan oo aad ku leedahay soo dhaweyn wanaagsan. Haddii aad isticmaaleyso fiidiyow, tijaabi xiriirkaaga ka hor kalfadhiga.
Isu diyaari ballantaada daryeelka dalwaddii ah.
Qor mawduucyada aad jeclaan lahayd inaad kahadasho kahor. Liis ayaa kaa caawin doona inaadan iloobin wax muhiim ah. Haddii aad la hadlayso dhakhtar daryeel dalxiis oo aan ahayn dhakhtarkaaga koowaad, diyaarso liiska xaaladaha socda iyo daawooyinka aad hadda qaadatid.
Adeegso qalabka guriga si aad u qiimeyso caafimaadkaaga.
Haddii aad ku haysato qalab caafimaad gurigaaga, sida heerkulbeegga, cabirka, ama kormeeraha cadaadiska dhiigga / cabbirka, u sheeg dhakhtarkaaga. Dhamaan qalabkan caafimaad waxay ku imaan karaan waxtar iyadoo kuxiran calaamadahaaga waxayna ka caawinayaan dhakhtarkaaga inuu ogaado xaaladaada. Waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa taleefankaaga inaad sawir ka qaadatid astaamaha jirka, sida finanka oo kale, una dir dhakhtarkaaga.
Xusuusnow, xaaladaha deg-degga ah waa xaalad deg-deg ah, xitaa inta lagu jiro COVID-19.
Haddii aad isku aragto astaamo daran ama lama filaan ah, oo nafta halis gelinaya sida xabad xanuun ama neefsashada oo dhib ku ah, had iyo jeer wac 911.